Muslimiinta Filistiin Iyo Maamulka Yahuuda Oo Madaafiic Is Weydaarsaday. – Bogga Calamada.com
Muslimiinta Filistiin Iyo Maamulka Yahuuda Oo Madaafiic Is Weydaarsaday.
Wararka ka imaanayo dhulka Filistiin ayaa sheega in saaka aroorti duqeymo xoogan ay ka dheceen qeybo ka mid ah magaalooyinka dhaca xuduud beenaadka kala qeybiya Gaza iyo dhulka Yuhuuda ay gumeysato.
Duqeynta oo ay is weydaarsadeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ee ka dagaalama Gaza iyo ciidanka Yuhuuda ayaa ka dhacday deegaanada xuduuda ah waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo labada dhinac soo kala gaaray.
Qof kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in subaxnimadi hore ee saaka ay kusoo tooseen jugta madaafiic culculus oo ciidanka Sahayuuniyada ay ku garacayeen goobo ay tuhunsan yihiin inay xeryo kuleeyihiin Muqaawamada iyo diyaaradaha dagaalka Yuhuuda oo si aad ah u dul heehaabaya Magaalada gaza.
Saxafi kasoo warama Magaalada gaza ayaa isna sheegay in duqeynta Yuhuuda ay ka horeysay duqeyn ay geysteen kooxaha Muqaawamada taas oo beegsatay qaar kamid ah xaafadaha lagu deegaameyey Yuhuuda ee dhaca Xuduud beenaadka.
Wazaarada difaaca maamulka yuhuuda ayaa dhankeeda sheegtay in qalabkeeda difaaca circa ee loo yaqaan Patriot uu ka hor tagay kudhawaad 30 Madfac oo ahaa hoobiyeyaal lagasoo tuuray dhanka Magaalada Gaza, kuwaas oo lala damacsana in lagu laayo dadka yuhuuda ah, waxa ayna ka dalbadeen Muwaadiniintooda inay ku nagaadaan godadka laga galo duqeymaha ee cidanka yuhuuda ay u diyaariyeen.
Magaalooyinka Dhaca Xuduud beenaadka kala qeybiyo Gaza iyo Dhulka Yuhuuda ay gumeysato ayaa maanta laga wada maqlay tiro 4 jeer ah codadka qalabka Digininta bixiya, waxaana laga dareemaya xaalad feejignaan ah oo adag.
Raisal Wazaaraha Yuhuuda Binyamin Natanyahu oo hadlay ayaa isna ku hanjabay inay jawaab adag ka bixin doonaan weerarkii Maanta, oo uu masuuliyadiisa dusha ka saaray Xarakada Xamaas iyo Xarakada Jihaadul Islaami.
wararkii u danbeeyey ee galabta soo baxay ayaa sheegaya in duqeynti ay geysteen Muqaawamada ay ku dhaawacmeen ilaa Lix Askari oo Yuhuud ah oo mid kamid ah xaaladiisa ay tahay mid liidato, sida ay qoreen warbaahinada faafiya arimaha Filisitiin.
Xarakada Xamaas iyo Kooxda lagu magacaabo Saraya Alquds ayaa ku sheegtay Masuuliyada duqeymihi Maanta dhacay bayaan wada jir ah oo caawa fiidkii ay soo saareen.
Weerarkaan hoobiyeyaasha ah ee lagu qaaday Maamulka Yuhuuda ayaa noqonaya weerarki ugu xoogana oo Sahayuuniyada ay la kulmaan wixii ka danbeeyey dagaalki 2014kii, waxaana laga cabsi qabaa in xaalada ay faraha ka baxdo dagaala toos ahna ay ka dilaacaan Marinka Gaza.